Umthandazo kuBathathu Emnye oyiNgcwele. ? Uthando, iimeko ezinzima kwaye ezingxamisekileyo.
Umthandazo kuBathathu Emnye Ongcwele Katolika ngothando, amatyala anzima kwaye angxamisekileyo kunye nokukhuselwa yenye yezona zinamandla kuba ibuza uYise, uNyana kunye noMoya oyiNgcwele ngokufanayo.
Ilizwi likaThixo lisibonisa unguThixo uYise wezinto zonke, ke asizise kuYesu Krestu onguThixo omnye owamenza umntu, wayephakathi kwethu wanikela ngobomi bakhe ngenxa yoluntu, xa esiya ezulwini wasishiya eMoyeni Santo kwaye ngoku sinokubala kuzo zontathu.
UYise noNyana basezulwini kwaye noMoya oyiNgcwele ushukuma entliziyweni yethu njengomlilo.
ICawa yamaKatolika inothotho lwe imithandazo eziqondiswe ngokukodwa kwezi zintathu zidityaniswe zinye, ubuThixo buqu.
Yimithandazo ephakanyayo kwiimeko ezahlukeneyo apho isandla somntu kwaye singenakusebenza kwaye ke sixhomekeke emthandazweni kuba ngummangaliso kaThixo owaneleyo.
1 Umthandazo kuBathathu Emnye Ongcwele ngubani uBathathu Emnye Ongcwele?
1.1 Umthandazo kwi-Holy Holy Catholic
1.2 Umthandazo kuBathathu Emnye Ongcwele wothando
1.3 Umthandazo woThixo oneziqu ezithathu ezingcwele ngamatyala anzima nakhawulezileyo
1.4 Ngokufutshane ukukhuselwa
Umthandazo kuBathathu Emnye Ongcwele ngubani uBathathu Emnye Ongcwele?
Umanyano lukaBawo; Unyana noMoya oyiNgcwele ngabo benza i-Tixo eNgcwele.
Inkangeleko yakhe yayihamba kancinci kwaye siyayibona kulo lonke eli xesha IBhayibhile.
Ekuqaleni, kwi-genesis uThixo ubonakala edala amazulu nomhlaba nayo yonke into ephilayo.
Ke kwiivangeli ze ITestamente eNtsha sibona ukuba uYesu Krestu ufikile, ezelwe yintombi enyulu ngomsebenzi nangesisa soMoya oyiNgcwele.
Apho ke siqala ukwazi bonke ubomi boMsindisi, emva kokuba eswelekile, evusa kwaye enyukela ezulwini, esishiya nesithembiso soMoya oyiNgcwele, kodwa oku kwabonakaliswa kuphela emva kwethuba lomhla wePentekosti ebhalwe kwincwadi yeZenzo. Abapostile kwaye bayaqhubeka ukusikhapha kude kube namhlanje.
Ubathathu Emnye esinikwe ngokucela kwentliziyo yethu, ezo sihlala sizenza emphefumlweni.
UBathathu Emnye oNgcwele uhlala elungele ukusiphulaphula.
Umthandazo kwi-Holy Holy Catholic
Ndiyakudumisa, Moya oyiNgcwele paraclito, Thixo wam neNkosi yam, kwaye ndiyabulela ngokungazenzisiyo kuyo yonke inkundla yasezulwini egameni leNkosazana eNtsekayo, Umfazi wakho onothando ngazo zonke izipho kunye namalungelo awambathe ngawo, ububele oye watyhafisa eyona ntliziyo yakhe iyingcwele nesulungekileyo kwesona senzo sakhe uzukileyo ezulwini; kwaye ngokuzithoba ndiyakucela egameni loMfazi wakho ongenguye, undinike ubabalo lokundixelela zonke izono ezinzulu endizenzileyo ukusukela kumzuzu wokuqala endona ngawo; Okwangoku ndibuhlungu kakhulu, ndinenjongo yokufa kunokuba ndicaphukise uBukumkani bakho. kwaye ngenxa yezona zinto zibalulekileyo kunye nokhuselo olufanelekileyo loMfazi wakho oluthande kakhulu, ndiyakucela ukuba undibonelele kwaye N.esona sipho sixabisekileyo senceba yakho nothando lobuthixo, undinike ezi zikhanyiso kunye noncedo olukhethekileyo athe uMmeli wakho wanaphakade amisele kwangaphambili ukuba uza kundisindisa, kwaye undikhokelele ewe
Umthandazo we-Holy Holy Catholic ineempembelelo kwangoko.
Umthandazo, isixhobo esinamandla esilungiselelwe thina kuphela sikholelwa kumandla eNkosi.
Isixhobo esinamandla esaziwa yiCawe yamaKhatholika ukuba sisisebenzisa kwaye sishiya umzekelo, umzekelo ukuze sikwazi ukubuza, amagama esiza kuwasebenzisa.
Umthandazo awubi ndawo, lithuba lokuba uqhele ukuthandaza, ufunde ukuthandaza ngokuchanekileyo, yiyo loo nto imithandazo ikhona ukusikhokela kule nkqubo.
Umthandazo kuBathathu Emnye Ongcwele wothando
Egameni loYise noNyana noMoya oyiNgcwele, Amen.
Utatu oNgcwele, ukuqala kwethu kunye nokuphela, amandla am noncedo lwam kunye noncedo lwam lobuthixo, ohlala entliziyweni yam kwaye ukhona emphefumlweni wam kwaye uqweqwedisa ubom bam bonke.
Usikelelekile uBathathu Emnye, ofanelwe yimbeko, uzuko nendumiso, ndiyakholelwa kumandla aKho, uYise uBawo, u-Nyana kaThixo, u-Moya Oyingcwele.
Ndizithemba ngamehlo izipho zakho kwaye ndiyathemba kuwe, kwaye ithemba lam kunye nothando lwam ndibeka ezandleni zakho, ndincede ndonyuse ukholo lwam kwaye yonke imihla nothando lwakho ube ngumntu ongcono kwaye uvuke ugcwele inkuthazo kunye nenkuthalo.
Thixo osikelelweyo, ungumthombo woluthando nobomi, osidalele ngokomfanekiselo wakho nangokufana nawe, kwaye ngenxa yokusithanda kwakho uthumele uThixo uNyana ukuze ngobomi bakhe asihlangule asisindise esonweni, mna ...
Ndikunika kwaye ndingcwalisa konke okuhlala kubuntu bam kwaye ndiyaxolisa kakhulu ndicela undixolele ngazo zonke iimpazamo endizenzileyo kunye nezono endizenzileyo ukuza kuthi ga ngoku nezazahlukanisa nam kuWe.
Utatu oNgcwele, ndiyakucela ukuba undibabale, undinike uncedo lwakho, ukuze umphefumlo wam uzaliswe nokuzola, undiguqule ndaba ngumonde, uxinzelelo, uthobekile kwaye unxibe ububele bakho.
UMoya oyiNgcwele osikelelekileyo, umthombo wentuthuzelo yonke, ndiyakucela ukuba uwutyebise umphefumlo wam ngobuninzi bezipho zakho.
Ulithemba lam nengweletshetshe yam kumlo wam, ungamandla am kwiimbandezelo nakuxhala.
Ngesi sizathu ndiza kuguqa ngamadolo phambi kwaKho ndizokucela ndicela undolule isandla sakho undincede phambi koThixo uBawo ukuba afumane uncedo.
UMoya oyiNgcwele wezulu, vuselela amandla am kwaye wandise isibindi sokuqhubeka neli dabi endijongene nalo, nceda undiyeke indlebe yakho ekutarhuziseni kwam kwaye undinike oko ndikunqwenelayo ndikubuze ngolu suku.
Nceda ukhanyise entliziyweni yam uthando lukaThixo olukhanyisela iintliziyo zabalandeli bakho abathembekileyo. Ngothando lwakho, amandla kunye nenceba ndiyakucela ukuba undikhulule kubo bonke ubunzima, kwaye ukuba kungabikho nto iphazamisayo uxolo lwam okanye indenze ndibandezeleke.
Utatu oNgcwele, ndiza ngokuzithemba okukhulu kuwe, nangalo lonke ukholo lomphefumlo wam, ukuze ukhulule usizi olundibangela ukubandezeleka okukhulu, ndicela undiphilise amanxeba entliziyo yam kwaye ndithulule inceba yakho kum kwaye into endiyidingayo kakhulu ungxamiseko:
(Xelela uBathathu Emnye oyiNtloko ngento oyifunayo ngokukhawuleza kwaye ucele uncedo lwabo oluzukileyo)
Thixo uBawo, enkosi kuba umamele imithandazo yam, nothando lwakho infinito, nangenxa yonqabiseko uthando lwakho olundinika lona, ​​luyandikhusela luze lundithuthuzele.
Ndicela undincede, Bathathu Oyingcwele, ndicela ukuba uthandaze kunye nokufaneleka kweNtombi Enyulu uMariya, uMama kaYesu kunye nomama wethu.
Ngaba uyawuthanda umthandazo oyiNgcwele ka-Tixo wothando?
Uthando lusoloko luyinjini yemithandazo yethu, nokuba lusishukumisela ukuba sicele abanye okanye sicela uthando ukuwela indlela yethu.
Nokuba yeyiphi na, into ebalulekileyo kukuba ubuze entliziyweni, ukusuka emphefumlweni kunye nokholo oluninzi.
Into eyenza ukuba imithandazo yethu ibe namandla kwaye sifumane iimpendulo kukuba siyakholelwa ekubeni izinto esizicelayo zinokuvunywa.
Ukucela uthando, ukuze sazi ukuba singaluchonga njani xa siwela umendo wethu kubaluleke kakhulu kuba ilizwi likaThixo lifundisa ukuba intliziyo iyakhohlisa kwaye inokusenza sikholelwe ukuba silufumana uthando xa ingekho.
Kungenxa yoko le nto ukukhokelwa nguBathathu Emnye oyiNgcwele kusisenzo sobomi nokufa.
Umthandazo woThixo oneziqu ezithathu ezingcwele ngamatyala anzima nakhawulezileyo
U-Tixo oNgcwele, u-Thatu kaThixo kunye kunye, uYise, Nyana noMoya oyiNgcwele, isiqalo sethu kunye nesiphelo, uqubuda phambi kwakho Ndiyabhatala: usikelelekile kwaye makadunyiswe uBathathu Emnye! Kuwe, Bathathu Oyingcwele malubekeke lonke uzuko, uzuko nendumiso ngonaphakade Ubunzima kunye nobungozi, kunye nezidingo zam, ndiyakuncoma.
Bawo wezulu, malusi olungileyo, Moya oyiNgcwele, ndiyakucela ngentetho kunye noncedo lwentombi esikelelekileyo enguMariya, ndinike uncedo lwakho, isikhokelo kunye nokukhuselwa kuyo yonke imiba nenkxalabo ngobomi bam.
Uzuko kuwe Thixo uYise, umthombo wokulunga nobulumko obungenasiphelo, ubomi buvela kuwe, uthando luvela kuwe, yenza wonke umzuzu ukusebenza ngobulungisa kunye nokuqonda ukonwabela iimpahla kunye nentuthuzelo ondithumelela yona; Khumbula ukuba ndingumntwana wakho, kwaye yiba nosizi ngeentlungu zam, ngeemfuno zam, undincede kule meko inzima.
(buza ngokholo olukhulu ukuba ufuna ukufezekisa ntoni)
Enkosi, Bawo onenceba ngokuba ulapho.
Luzuko kuwe, Nyana kaBawo waseZulwini, ekuthi intliziyo yakhe ingcwele ihlangabe kuwe, ndifundise ukuxelisa ubomi bakho kunye nobuhle bakho, ndenze ndingagungqi kwaye ndizimisele ukufezekisa iimfundiso zakho kwaye ndenze imisebenzi yokubonelela ngesisa rhoqo, ungandilahli ubunzima bemihla ngemihla, ndikhulule kumakhonkco onotshaba olundenzele lona, ​​undisuse kude undikhusele kulo lonke uhlobo lobunzima olundiphazamisayo kwaye undinike uncedo lwakho olungummangaliso kule ngxaki: (ephinda isicelo ngethemba elikhulu).
Enkosi kuYesu wam olungileyo ngokuba ecaleni kwam ngexesha lokuphelelwa lithemba kunye nentlungu.
Uzuko kuwe Moya oyiNgcwele, ukucacisela okukhanyisela yonke into, nokuba ulonwabo, imvisiswano kunye novuyo lwendalo, kuyenze ihlale ilungile kwizikhuthazo zakho zokomoya zindinike uxolo, ndincede kwiindawo zam ezingenanto kunye neengxaki kwaye undinike uncedo lwakho ukuze ndikwazi ukufezekisa izinto endizifunayo ngoku.
Ndiyabulela kuMoya oyiNgcwele woThando ngokundinceda xa yonke into imnyama kwaye ndifuna ukukhanya.
Umama wam kunye noKumkanikazi, Nenekazi leSibhakabhaka Wena osondele kangaka kuBathathu Emnye undithandazise kunye neengxaki zam kunye nokusilela, yiba Ungummeli wam nesiqingatha ukuze isicelo sam sibekhona, ndenze ukuba ndifumane lo mmangaliso uqinisekileyo ubomi bam
Ndiyabulela kuMama wam endimthandayo, uMariya oyiNtombazana osikelelekileyo, ngokuqonda kangaka kwaye usoloko uhlangabezana neemfuno zethu.
UZiqu-zintathu, uBawo, Nyana noMoya oyiNgcwele, ndinike inceba yakho, undenzele ububele bakho kwaye undinike isisombululo esikhawulezayo kubuhlungu bam kunye nokuxhalaba kwam.
Bawo, Nyana noMoya Oyingcwele, Usikelelekile kwaye Ungoyena Utatu Ungcwele, ndiyakuthanda, ndiyakuthanda kwaye ndiyakunika ubuntu bam.
O Utatu ka-Thando, Thixo onemfesane, ndiyazishiya kwiNtando yakho yobuthixo, kuba amaxesha akho agqibelele kwaye nguwe kuphela owazi eyona nto ilunge kum, Uzuko kuYise, Uzuko kuNyana, uzuko kuMoya oyiNgcwele, uzuko kuBantu abasikelelekileyo nabangabalulekanga ITrinidad, njengoko yayinjalo ekuqalekeni, ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade.
Ezo ziimeko apho akukho nto ngokomntu inokwenzeka.
Ezo meko ke apho zisinike khona isigulo sonyango, apho ilungu losapho lilahlekileyo, apho umntwana efuna uncedo kuThixo kwaye engazi okanye engafuni ukusicela, ukubandezeleka, iintlungu, ukungabi namandla, ukungazinzi kunye neemeko ezithile kunye neemvakalelo ezisenza silangazelele kakhulu. kuzo apho isandla esinamandla sikaThixo sihamba ngamandla.
Umthandazo oyiNgcwele ka-Tixo unokuba luncedo lwethu kungekudala phakathi kweyona ngxaki inzima ukusombulula.
Yonke into sisenzo sokukholwa kunye nokuthembela eNkosini, sikholelwa ukuba ulawula zonke izinto kwaye uyazi ukuba wenza ntoni.
Ndiyakuvuma kwaye ndiyakuhlonipha, OyiNtombi eNgcwele eNgcwele, iKumkanikazi yaseZulwini, Nkosazana nePatressess yendalo iphela, njengeNtombi kaBawo ongunaPhakade, uMama woNyana wakhe oyintanda, kunye neqabane elithandekayo loMoya oyiNgcwele; kwaye uguqe ezinyaweni zobukumkani bakho obukhulu ngokuzithoba okukhulu ndikucela ngenxa yothando lukaThixo; ukuba ubuzele ngokugqithileyo ekuNyukelweni kwakho ezulwini, ukuba undinike ubabalo kunye nenceba yokundibeka phantsi kokhuselo lwakho olunyanisekileyo noluthembekileyo, kwaye undamkele ngenani labona bakhonzi bonwabileyo nabanethamsanqa obathweleyo ebeleni lakho lobuntombi.
Zithobise, owu Mama kunye nenenekazi lam elinenceba, ukwamkela intliziyo yam elusizi, inkumbulo yam, ukuthanda kwam, kunye namanye amandla angaphakathi nangaphandle neemvakalelo zam; Yamkela amehlo am, iindlebe zam, umlomo wam, izandla zam kunye neenyawo zam, uzilawule ngokokwamkelwa nguNyana wakho, ukuze ngako konke ukushukuma kwakhe azimisele ukukunika uzuko olungenasiphelo.
Kwaye obo bulumko awathi wena Nyana wakho oyintanda wakukhanyisela, ndiyakucela ukuba undifikele ukukhanya nokucaca ukuze ndizazi kakuhle, ukungabi nto yam, ngakumbi izono zam, ukuzithiya nokuzicekisa, kwaye nokundifikelela ekukhanyiseni ukwazi imigibe. yotshaba olungenalusini kunye nokudibana okufihlakeleyo kunye nokubonakalyo.
Ngokukodwa, uMama ohlonela uThixo, ndiyakucela ubabalo lwakho ... (khankanya).
Oku umthandazo ongummangaliso U-Ala Santísima Trinidad ukubuza impilo yethu, ukhuseleko kunye nempumelelo yomelele kakhulu!
Uyasikhusela, usikhathalela y Sikhokele ukwenza kuphela ukuthanda kukaThixo. Singacela ukukhuselwa thina okanye iintsapho zethu kunye nabahlobo.
Khumbula ukuba onke la mandla amahle avela kuthi avela kuyo yonke into ejikelezileyo.
Akukho nto engenakukwazi ukusikhusela kubathathu emnye, akukho nto yomeleleyo okanye enamandla ngaphezu koThixo, yiyo loo nto sithembele ukuba nguye osikhathaleleyo nakwezethu nokuba ziphi na.
Unokuthandaza naphi na xa ufuna.
Umthandazo kuBathathu Emnye awunosuku olufanelekileyo, iyure okanye umzuzu.
Kufuneka sithandaze xa sifuna ukuthandaza. Kufuneka sibe nokholo kwaye sihlale sikholelwa ukuba yonke into ihamba kakuhle.